Xiriirka kubadda Kolayga oo qabanaya kulan lagu maamuusayo lixdan guudarada Taariikhda Isboorti ee Macallin Tuke, Ogoow kooxaha ku ballansan abaalmarinada lagu bixin doono
Thursday, April 25th, 2019 - 12:52:11
Sunday November 18, 2018 - 21:55:04 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Kolayga ayaa maalinta berry ah oo ay taariikhda ku beegan tahay 19 November garoonka Wiish ku qaban doona kulan lagu maamuusayo lixdan Guurada taariikhda Isboortiga ee Macallin Cabdullaahi Xasan Saalax ( Macallin Tuke).
Kulanka oo uu Xiriirka horay ugu dhawaaqay ayaa waxaa kuu loolami doona kooda Heegan oo Horyaalka hanatay iyo Xiddigo laga soo xulay Naadiyada Kubadda Kolayga oo ku ciyaari doona Magaca Gift Star.
Sida uu Horay u sheegayGuddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda Kolayga Mudane Cabdullaahi Nuur Cadaani in Xiriirkiisu ka qayb qaadandoono kulanka lagu waynaynayo taariikhda Isboorti ee Macallin Tukewaxaana kulankan bilow u yahaytartanno lixdan guurada loogu talo galay oo ka dhici doona dalka Canada.
Macallin Tuke ayaa kamid ahaa ciyaartoydi ugu horeysay ee Soomaaliya yeelato sanadihii 50-aadki ka hor intii ay SoomaaliyaXurnimada qaadan ayaaIsboortiga kasoo dhex muuqday lixdan Sano oo isgu jiray Heer iyaaryahan , heer macallin iyo heer Maamul.
Kulanka ayaa ka dhici doona garoonka Wiish waxaana lagu bixin doonaa Abaalmarino , waxaana kasoo qayb gali doona Halyeeyada Isboortiga dalka iyo madaxda Xiriirada Isboortiga iyo taageerayaashii Isboortiga xog ogaalka u ahaa taariikhda Macallin Tuke.
Sidoo kale waxaa isla garoonka Wiish lagu bixin doonaakoobabka iyo abaalmarinada Horyaalka Kubadda Kolayga 2018-19 ee dhawaan soo idlaaday.